Kambodza : Fisalasalana manodidina ny fitsarana an’ireo Khmers Mena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2018 6:16 GMT
Efa mipetraka mandritry ny herinandro maro izao, ho an'ny fitsarana voalohany ny an'i Kaing Guek Eav, fantatra amin'ny anarana hoe Douch noho ny heloka bevava nataony tamin'olona sy heloka an'ady, ny Efitra Manokana eo anivon'ny Fitsarana ao Kambodza ho Fitsarana ny heloka natao nandritra ny vanim-potoanan'ny Kampuchea Demokratika, na ECCC. Fa raha toa ka mandeha tsara ilay fitsarana, maro no manontany tena momba izay ho enti-manana ampiasain'ity fitsarana ity mba hahatongavana any amin'ny fampihavanam-pirenena. Olana roa goavana ny fampihenana ny kolikoly mifandray amin'ireo fanomezana ara-bola atolotra ho an'ny fitsarana sy ireo isanà fitsarana voafetra ho amin'ireo olona dimy mpitarika tao amin'ny khmers fotsiny.
Mikasika ny fanjakana kambodziana ilay raharahana kolikoly, ahiana ho nampiasa tamin'ny fomba ratsy ireo fanohanana ara-bola natokana ho an'ity fitsarana ity, izay ny ankamaroany avy tamin'ny firenena hafa avokoa. Misy eto sy eto ny lahatsoratra an-gazety maro, toy ny tafatafa an-gazety an'ilay mpisolovava misahana ny fiarovana an'i Nuon Chea, iray amin'ireo voampanga izay eo am-piandrasana fitsarana, navoaka tao amin'ny CAAI News Media.
Anisan'ny olana hafa amin'ity fitsarana ity ihany koa ny isa tena voafetra an'ireo mpikambana Khmers mena izay tsaraina. Mijanona amin'ireo mpitarika lehibe tao amin'ny Khmers Mena ihany ireo fitoriana.
Namoaka lahatsoratra nosoratan'ilay profesoram efa misotro ronono, A. Gaffar Peang-Meth, avy ao amin'ny oniversiten'i Guam, ny KI Media , izay anoratany hoe :
Ny olana dia tena mbola tsy ampy hitondra ny rariny sy ny fampihavanam-pirenena ho an'ireo Kambodziana, mba hanombohana fahasitrànana, sy hampiroboroboana ny fandriampahalemana ao amin'ny firenena, ny fijanonan'ilay fitsarana ho amin'ireo mpitarika dimy tao amin'ny Khmers Mena noho ny fahafatesana olona roa tapitrisa teo anelanelan'ny taona 1975 sy 1979.
Raha ny mikasika azy, tsy mino i Sopheap Chak fa hitondra ny rariny ny fitsarana ireo Khmers Mena, anisan'ny mahatonga izany ny hoe :
Tsy hoentina manoloana ny fitsarana ireo firenena vahiny nanohana ny Khmers Mena, na ny mpandrisika fototra tamin'ny fiforonan'ity fitondrana lozabe ity. Milaza mazava tsara ny lalàna ao amin'ny fitsarana fa ireo olona nanao ny heloka irery ihany no ho tsaraina.
Tsy mino ihany koa izy fa hahatonga amin'ny fampihavanam-pirenena ny fitsarana :
Ho an'ny fiarahamonina kambodziana, handaitra tsara ny tena fampihavanana rehefa hiverina ny fifampitokisana eo amin'ny samy olombelona: rehefa afaka ny hifampitsiky sy hifanome toky indray izy ireo. Noho izany, tokony hapetraka ny tafatafa nasionaly, na ny kaomisiona ho an'ny fahamarinana mba hahafahan'ireo olona, indrindra ireo niharam-boina, hiatrika tanteraka ny fijaliany sy ny filàny.